गत साता त्रिभुवन विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलमा पुग्दा मलाई कताकता २० वर्षअघि भर्खर खुलेको गोंगबुको बसपार्क पुगेजस्तै लाग्यो । जाने बेलामा मैले नचलेको सुरक्षा गेटको विषयमा त्यहाँ उपस्थित प्रहरी अधिकृतलाई भनेँ । तर आउने बेलामा ब्याग लिन जाँदाको दृश्य हेरेर त म दंग परेँ । नयाँ बनेको टर्मिनलमा अहिले पनि ‘कनवेयोर बेल्ट’मा चार–पाँच विमान कर्मचारीहरूले तँछाड–मछाड गरिरहेका यात्रुहरूको सामान दिइरहेका थिए । २१ औं शताब्दीमा पुरानो परम्परालाई नेपालीहरूले जतन गर्नसक्ने क्षमताबाट म दंग परेँ । नेपालको क्यान (नागरिक उड्डयन प्राधिकरण) ले गतवर्ष झन्डै ५०० करोड रुपैयाँको आम्दानी गर्‍यो, कर्मचारीहरूलाई ५३ करोड रुपैयाँ बोनस बाँड्ने निर्णय पनि अघि सार्‍यो । यति पैसा हुने संस्थाले विश्वको अन्य एयरपोर्टमा झैं किन २० करोड रुपैयाँ खर्च गरेर अत्याधुनिक ‘बेगेज सिस्टम’ हाल्न नसक्ने ? एयरपोर्टको दुर्दशा पैसाको कमीले होइन, सोचको कमीले गर्दा हो ।
संसारमा धेरै काम गरिसकेकालाई काम गर्न बिभिन्न रूपमा गाह्रो पारेर नेपाल छाड्न बाध्य बनाउँछौं । खरिद नियमहरूलाई यस्तो राम्ररी परिमार्जन गरिएको छ कि संसारका राम्रा कम्पनीहरूले कहिले नेपालमा काम गर्न सक्दैनन् । हामीले हाम्रा नियम कानुनहरू यसरी विकास गरेर लागेका छौं, जसले गर्दा संसारका ‘ट्याक–टुक’ मिलाउन सक्ने र नेपाली कम्पनीहरूसँग ठ्याक्क मिल्नेगरी बनाउने रुचि राख्ने बनायो । ‘सेटिङ’ जस्ता अंग्रेजी शब्दहरूको नयाँ नेपाली परिभाषा निकाल्यौं । राजनीतिक अस्थिरताहरूको फाइदा लिएर नेताहरूलाई राष्ट्रवादको नाममा ‘माफिया’, ‘चलखेल’जस्ता शब्दहरूको गजब उपयोग गरी छोटो कार्यकाल भए पनि फाइदामूलक बनाइदिए । अब किन चाहियो विश्वका सर्वश्रेष्ठ कम्पनी र प्रविधि ? पांँच सय हजार करोडको ठुला परियोजनाहरू बनाएर उद्घाटन गर्नुभन्दा एटीएम, दिसामुक्त क्षेत्र र झोलुंगे पुलहरू उद्घाटन गर्नमा व्यस्त भए ।
सानो छँंदा बच्चाहरूले सामान छरपस्ट पारी कोठाभरि छर्दा हामीले बच्चालाई अन्य कति संस्कृतिमा झैं त्यो बटुलेर मिलाउन अक्सर सिकाउँदैनौं । हामीले बिगारेकोलाई बनाउने संस्कृतिसँग त्यति विश्वास गर्दैनांै । तसर्थ राजनीतिक पार्टीहरूको अधिवेशन होस् वा कुनै संस्थाको निर्वाचन होस् वा कुनै निजी कम्पनीले आयोजना गरेको कार्यक्रम नै किन नहोस्, अक्सर हामीले कार्यक्रमपछि भएको फोहोर छरपस्ट देख्छौं । यस संस्कृतिले गर्दा होला, सडक भत्काउन जसरी लागिन्छ, बनाउनतिर त्यति चासो देखिँंदैन । धुलो र फोहोर नै हाम्रो संस्कृतिको धरोहर हो भन्ने झल्काउन थाल्छौं । तसर्थ पहिलो, यस भत्काउने संस्कृतिबाट बनाउने संस्कृतितिर लाग्नैपर्छ । सुरु सायद उत्पादन गरेको फोहोरको व्यवस्थापनबाट गर्नु उत्तम होला ।